Conveyor waa mid ka mid ah aaladaha ugu muhiimsan ee hawlgallada shirkadaha casriga ah, mashiinnada saadka iyo qalabka, waa aasaaska hay'adda macquulka ah ee wax soosaarka tirada badan iyo habka socodka makaanigga ah. Shirkadaha saddexaad ee loojistikada, rarka waa aasaaska iyo farsamada abaabulka ...
1. Xiisadda suunka oo aan ku filnayn Haddii suunka uusan lahayn xiisad ku filan, ma jiri doono xoog ku kala-wareejin xoog u dhexeysa wadista gawaarida iyo suunka, mana awoodi doono inay jiido suunka oo ay rar dhaqaajiso. Qalabka xiisadda ee wareejinta suunka badanaa waxaa ku jira xiisad fur, haydarooliga ...
Go'aaminta xawaaraha ayaa aad muhiim ugu ah qaabeynta suunka xambaaraha, kaas oo la xiriira mugga gaadiidka iyo qiimaha. Kordhinta xawaaraha suunka xambaaraha qaada suunka waxay hagaajin kartaa awooda gudbinta. Isla duruufaha gaadiid ee isku midka ah, xawaare yar ayaa loo isticmaali karaa, iyo l ...